China iSolid Steel Self-Fired Fire Pit Basket abavelisi kunye nababoneleli |THYH
INKOSIKAZI EQINISEKILEYO YOKUZITYISA YOMLILO
Lo msebenzi unzima kakhulu wokuZityisa uMngobozi woMlilo wokongezwa ngokugqibeleleyo kuyo nayiphi na indawo yomlilo yangaphandle okanye umsesane womlilo.
I-self-Fieding Fire Pit Basket yenzelwe ukutshisa okusebenzayo okujoliswe ekulondolozeni iinkuni zakho ngokudala ilangatye elinamandla kunye nezigodo ezimbalwa.Lo mngxunya wentsimbi esomeleleyo ubekwe ngokuthe nkqo wenziwa ngemilenze emine ephakamisa ibhaskithi ukuze ijikelezwe ngcono komoya kunye nokuzinza okungakumbi.Ayisiyiyo kuphela indawo yomlilo ezinzileyo, kodwa iya kuphemba umlilo omnandi wokutshisa ubusuku bonke.
- Londoloza iinkuni ngokwenza idangatye elibukhali ngakumbi ngezigodo ezimbalwa
- Ukubeka iinkuni phantsi emgangathweni ukuze umoya ujikeleze ngcono
- Ukwakhiwa kwentsimbi eshinyeneyo kuya kuhlala ubomi bonke
Ngaphambili: Corten Steel Dual Flame Umngxuma woMlilo ongenamsi
Okulandelayo: 38″Umngxuma woMlilo oneSwivel Grill
INGOZI YOMHLABA YOMLILO
Umgangatho olungileyo, amaxabiso afanelekileyo, iindidi ezityebileyo kunye nenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa, ilungile!
NguLauren wasePortland - 2017.03.28 12:22
Abasebenzi benkonzo yabathengi kunye nendoda yokuthengisa banomonde kwaye bonke balungile kwisiNgesi, ukufika kwemveliso kukwangexesha kakhulu, umthengisi olungileyo.
NguYannick Vergoz waseMalaysia - 2017.07.28 15:46
30″ enkulu yoFikelelo oluLula ngeSpa Steel...
Umnatha olukwe ngobuqhetseba owenziwe ngentsimbi ekhazimlisiweyo eStainless.Intsimbi engatyiwayo ixhathisa imozulu kubomi obude.Ithintela iintlantsi namalahle ukuba angaphumi.Nceda ulinganise indawo yakho yomlilo ukuze uqinisekise ukuba isikrini se-intshi engama-29-30 siya kungena ngokukhuselekileyo.I-Hinged spark screen ivumela ukufikelela ngokulula emlilweni ngaphandle kwesidingo sokususa isikrini kwaye inesiphatho esifanelekileyo phezulu ukuphakamisa isikrini sivule kwaye sivale.Ngenxa yobume obuxhonyiweyo besikrini, i-diameter imfutshane enye indlela kunenye, evumela i-sh...
I-33-KUMGODI WOMLILO we-DIAMETER ENE-24-INJALI YE-WAGON ...
I-33-Inch 33 I-ICH ISAZI SOMLILO: - 1.5 mm umlebe ongqindilili wentsimbi - 1 mm umsesane ongqindilili wentsimbi - umsesane wobushushu obuphezulu - Ulwakhiwo oluhlala ixesha elide I-24-intshi ye-WAGON WHEEL IIMPILO: - Imiphetho egobileyo igcina iinkuni ukuba zingaqengqeleki ngaphandle kwegrayiti yomlilo ukuze zikhuseleke. umlilo - Ukuphakamisa i-intshi ye-4 ukusuka kumhlaba ukunyuka komoya - i-0.75-intshi yensimbi esetyenziselwa izithuba zenkxaso kunye ne-pinwheel 33-INCH I-FIRE RING SPECS: - I-Inner Ring Diameter: 27-in.- I-Diameter iyonke: 33-in.- Ubunzulu bubonke: 10-ngaphakathi.- Ubungakanani boMlebe: 3-in.I-24-Intshi ye-WAGON WHEEL GRATE SPE...